Fikambanana Av7 : Gadrao Ravalomanana Marc -
AccueilRaharaham-pirenenaFikambanana Av7 : Gadrao Ravalomanana Marc
Nanoloana ny tsangambato misy ny fahatsiarovana ireo namany izay voatifitra nandritra ny febroary 2009 no naneho ny alahelony sy ny fahatezerany ireo mpikambana anivon’ny Av7 izay notarihin’ ny filohany Bonat Jean Pierre « Tanteraho ny didy izay efa nivoaka, gadrao Ravalomanana, tsy azo ekena ny tsy manota » hoy ny AV7. Manoloana izany indrindra dia nilaza ny AV7 Fa tandindomin-doza izy ireo ka mila fiarovana, izany indrindra no niantsoan’ ny AV7 ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ ny alalan’ ny sora-baventy milaza hoe « Filoha Rajaonarimampianina arovy izahay, ampiharo ny lalàna ». Tamin’ ny feo hentitra sy mafy no nanambaran’ny AV7 ireo alahelon’ izy ireo, satria dia navadika ny tolona, manoloana ny fifanantonan-dRavalomanana sy Andry Rajoelina, ka ny hany herin’ny AV7 dia ny fiantsoana ny filoha ankehitriny hampihatra ny lalàna sy hiaro azy ireo. Mikasika io fifanantonan-dRavalomanana sy Rajoelina io, dia nilaza mazava ny AV7 fa toa matimaty foana ny rà latsaka nandritra ny tolona, ary toa lasa fitaovana nentina nangalana seza ny vahoaka tonga niakatra teny ambohitsorohitra, satria dia nihavana ihany kay ireto olona izay nandetika vahoaka sy nanao sorona ny malagasy ireto. Noho izany dia nambaran’ny filohan’ ny AV7, fa « tsy rarahinay intsony na miara-matory azy Ravalomanana sy Andry Rajoelina, aminay dia mpamadika sy mpamono olona no tazana ankehitriny » hoy hatrany ny AV7.
Manoloana ireo zava-mitranga ireo dia manao antso avo amin’ ny fitondram-panjakana, indrindra amin’ ny fitsarana ny AV7 amin’ ny fampiharana ny lalàna izay efa nivoaka, ary efa nahazoan’ izy ireo ny antsoina hoe ‘’Grosse’’, io didy io dia ny tokony hanonerana ireo niharam-boina nandritra ireny fitifirana teny Ambotsirohitra ireny, eo ihany koa ny fampiharana ny didy nivoaka amin’ ny tokony hampidirana am-ponja izay voakasiky ny raharaha rehetra, ary anisan’ izany i Ravalomanana Marc. Mikasika io fanonerana io dia fantatra ireo fa efa misy ny fandraisan andraikitra, izay hiarahan’ ny AV7 sy ny vadintany, amin’ny fanagiazana ny fananan-dRavalomanana manoloana ny tsy fanonerany ireo izay niharam-boina nandritra ny 7 febroary 2009. Noho izany dia hafana tanteraka ny fanamarihana ny fankalazana ny 7 febroary, satria dia nilaza ny tsy hanaiky hatramin’ ny farany ny zava-mitranga ny AV7, ary hiady hatramin’ ny farany. Manoloana ny datin’ ny 7 feboary ho avy izao moa dia hanatanteraka hetsika fanateram-boninkazo ny AV7 manoloana ny tsangambato etsy ambohitsorohitra.